Isixuku: +86 13013230888
Izinsimbi ze-cast cast kanye nezimbiza zensimbi ezifakiwe zifanelekile ukupheka
Ukusebenzisa amathuluzi afanele kungenza indalo yakho yokupheka ibe ngcono kakhulu. Izinto ezisetshenziswa ezitsheni zokupheka zizothinta zonke izici zezitsha ozilungiselelayo-yize kulula ukubamba ibhodwe lokuqala ohlangana nalo lapho ulungisa isidlo sakusihlwa noma ubhaka uphudingi, ukukhetha ibhodwe elifanele kungafaka ...
Sakaza ipani yensimbi noma ipani engeyona induku: yikuphi okungcono?
Noma ngabe ungumpheki ojwayelekile noma umpheki oqeqeshiwe, nakanjani ufuna ipani lokuthosa elihle ekhishini. Ungenza cishe noma yini ngepani lokuthosa, kusuka kumaqanda aqotshiwe kuya kuma-steaks aboshiwe kuya kwesinkwa sommbila othosiwe nokunye. Lapho uthenga ipani lokuthosa, kungadingeka ukuthi ukhethe phakathi kwe-classic cast iro ...
i-bakeware engcono kakhulu yokosa ngaphakathi
Ukosa inyama kuyindlela enhle yokwenza isidlo esilula, kepha uma uhlala endlini encane noma isimo sezulu sibi, ukupheka ngaphandle kungaba yinselele. Yilapho i-bakeware ingena khona. Ukubukeka kwalesi sipheki kuyafana nokosa kwasendlini, okunephunga elishisiwe nelibhemayo, ngakho-ke akukho ...
Izimbiza namaphani kaSanxia akhombisa embukisweni wesipho waseShenzhen
Kusukela ngo-Ephreli 25 kuya ku-28, umbukiso wezipho zomhlaba wonke waseChina (Shenzhen) nowemikhiqizo yasendlini ububanjelwe eShenzhen International Convention and Exhibition Center. I-Sanxia, ​​njengo-drafter wezinga eliphezulu lokuphathwa kwemikhiqizo yoqweqwe lwensimbi yaseChina, iba phakathi kwabayishumi abaphezulu ...
ISanxia eyakhe ilabhoratri iwine ukuvunywa kweziqu ze-CNAS
Ngo-Okthoba 14, 2020, ilabhoratri likaSanxia lawina imvume yokuthola iziqu ze- "China National Accreditation Service for conformity assessment" (CNAs), futhi ngokuzimela lingahlola ukuhlolwa kokuhambisana kwe-cast iron koqweqwe lwawo. Kusukela lapho, iSanxia kitchenware ine-b ...
IShanghai “department store Exhibition” iSANXIA ikhombisa amandla amakhulu ngemikhiqizo emisha
NgoJulayi 23, 2020, i-114th China general merchandise Fair (CME) yasungulwa ngokusemthethweni eShanghai New International Expo Center. I-Sanxia ivele kulo mbukiso, futhi ngomkhiqizo wayo "Rockwell" kanye ne "Sanxia" imikhiqizo eminingi emisha, ikhombise amakhasimende esayithi i-enterpri ...
I-Iron Iron Skillet, uNamel Skillet, i-Cast Iron Skillet enamanzi, i-Iron Iron Skillet engathinti, I-xtreme Iron Skillet, eqanjwe i-Cast Iron Skillets,